पार्टीको ‘पोजिसन’ तेस्रो भएपनि मूलतः हाम्रो जित भएको छ « Artha Path
प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७९, आईतवार
पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं केन्द्रिय सदस्य (नेकपा माओवादी केन्द्र)
माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेर पनि तेस्रो स्थान मात्र प्राप्त गर्यो । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
तपाईको पार्टीले गलत मानिसलाई टिकट दिएर धेरै ठाउँमा हार भएको भन्ने सुनिन्छ । के यो साँचो हो ?
पार्टीले सकेसम्म योग्य, क्षमतावान र इतिहास बोकेका मानिसहरुलाई टिकट दिएको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप ०७४ को भन्दा राम्रो परिणाम आएको हो । कुनै कारणवस कमजोर नेता कार्यकर्ताहरुलाई चुनावको टिकट केहि ठाउँमा दिइयो होला तर गलत मानिसको हातमा टिकट परेको थिएन । गठबन्धनलाई हामीले सबै ठाउँमा गर्न सकेनौं । महानगर, उपमहानगर र केहि नगरपालिकामा मात्र गर्न सक्यौं, त्यो हामी सबै गठबन्धन पार्टीहरुको कमजोरी रह्यो । अब संघीय संसदको चुनावमा गठबन्धनमा यस्तो कमजोरी रहने छैन । हाम्रो गठबन्धन अझ मजबुत ढंगले अघि बढ्ने छ । तर हाम्रो गठबन्धनलाई खलबलाउन अनेक तत्वहरु लागी परेका छन् । यसतर्पm हाम्रो पार्टी विशेष सचेत रहनु पर्दछ ।
मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले पाँचौ स्थान प्राप्त गर्यो स्थानीय चुनावमा । तर तपाईले माओवादी कमजोर भएको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ । के हो यसको प्रमुख कारण ?
काठमाडौं महानगर लगायत थुप्रै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजय भएका छन् । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
यहाँले थुप्रै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आएका छन् भन्नु भयो त्यो कुरा सत्य होइन । कुन निर्वाचन क्षेत्रमा २/३ प्रतिशत पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि विजयी भएर आएका छैनन् । राजनीतिक दलमा वितिष्ठा आएको कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवार आएका हुन् भन्ने मलाइ लाग्दैन । राजनीतिक पार्टीमा सोच विचार कमी भएको भने पक्कै हो । राजनीतिक दल शतप्रतिशत ठिक भएको थिए भने स्वतन्त्र उम्मेदवार आउने थिएनन् । स्थानीय निर्वाचनमा राम्रा मान्छे स्वतन्त्रपूर्णक जित्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।
तपाईको पार्टीको नेता आर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्र भएको बेला अर्थतन्त्र किन संकटमा परिरहेको छ ?